Iimfowuni ziguqula amagagasi omsindo kwimigodi yamandla kagesi.
Imakrofoni iyisisitye sokuguqula amandla ase-acoustic ibe ngamandla kagesi aneempawu ezifanayo ezijikelezayo. Iimfonofowni ziguqula amagagasi omsindo kwimigodi yamandla kagqityi ekugqibeleni iguqulwa ibe ngamaza omsindo kwiintetho. Baqala ukusetyenziswa kunye neefowuni zokuqala kunye nabahanjethi bee-rediyo.
Ngowe-1827, uSir Charles Wheatstone wayengumntu wokuqala wokuhlawula ibinzana elithi "microphone."
Ngomnyaka we-1876, u- Emile Berliner wasungula imakrofoni yokuqala esetyenziswe njenge- transmitter yezwi . E-US Centennial Exposition, u- Emile Berliner ubonile i-Bell Company yocingo yabonakalisa kwaye yaphefumlelwa ukuba ifune iindlela zokuphucula umnxeba omtsha. I-Bell Telephone Inkampani yahlaziywa yinto eyenziwa ngumvelisi kunye nokuthenga i-microphone ye-Berliner ye-patent ye-$ 50,000.
Ngowe-1878, i-microphone yekhabhoni yaqulunqwa nguDavid Edward Hughes kwaye kamva yaveliswa ngee-1920. I-microphone yeHughes yayiyimodeli yokuqala yee-carbon microphone ezikhoyo ezisetyenziswayo.
Ngokuveliswa kwerediyo , ii-microphone zokusasaza ezitsha zadalwa. I-microphone yenziwe i-ribbon ngo-1942 kwi-radio ukusasazwa.
Ngo-1964, abaphandi bakaBell Laboratories uJames West noGerhard Sessler bamkela i-patent ayi. 3,118,022 ye-electroacoustic transducer, i-electret microphone. I-microphone ye-electret inikezela ukuthembeka okukhulu, ukuchaneka okuphezulu, indleko ephantsi, kunye nobukhulu obuncinci.
Yashintsha imboni ye-microphone, kunye ne-bhiliyoni enye eyenziwe ngonyaka.
Ngee-1970, i-mics enamandla kunye ne-condenser yasungulwa, ivumela ukuqonda ubuncinane besandi kunye nokurekhoda okucacileyo.
Imbali yeNgqungquthela ye-Tom Thumb Steam kunye noPeter Cooper
UJethro Tull kunye neNtsholongwane yeMbewu yePilisi
Konke Ngokuma kwePaddleboarding Gear
Izinyoka zePhambi: Ibali leNyoka yokuVikela
Imizekelo yoLwazi (uLwimi)
Ininzi Iinkcazo zexabiso le-Shadow
Ezi-10 eziMgangatho oMgangatho othembekileyo osetyenzisiweyo
Abani baseMerika baseMelika?
Iintlobo zeeNtsholongwane ze-Insect Pupae
Imixholo engongqinelaniyo kwiSikole samabanga aphakamileyo
In Fait - Inkcazelo yesiFrentshi ichazwe
Ixesha eli-1 laseYiputa eliPhakathi eliPhakathi
Ukwazi i-Christian Pop Band Newsong